Ndekọ Mgbasa Ozi - RayHaber
Mgbasa ozi RayHaber - Mgbasa ozi
2019 Wolfteam Derby obi ụtọ ibi na Turkey Cup
Turkey kasị ewu ewu na fps egwuregwu haziri maka Wolfteam, derby na 2019 20 Wolfteam Turkey Cup na Fenerbahce on July 2019 1907 obi ụtọ ga-ebe n'etiti Galatasaray Esper ìgwè. Ihe Ngbawa Na-eme Nchọpụta 18: 00 ga-agbasa na Youtube Wolfteam. [More ...]
Redio oru ahia malitere mgbasa ozi mgbasa ozi na Terrium na Izmir na Bursa
ST Radio Radio, nke na-agbasa ozi mgbasa ozi ụwa na Istanbul maka ihe dịka ọnwa 105.8, malitere mgbasa ozi na 6 na Izmir na 102.8 na Bursa. ST Radio Radio, nke bụ akụkụ nke Media Media, na-agbasawanye netwọk mgbasa ozi nke ụwa. Ruo ngwụsị afọ [More ...]
Ememme Egwuregwu Electronic Big Burn Istanbul 26 Amalite na July
26-27-28 ga-ebe July, Turkey kasị ukwuu electronic music ememme Big Ọkụ 3 ụbọchị n'oge okpomọkụ ọkụ Sile mmanụ ụgbọala bigburn nke ghọọ a ọdịnala nke atọ nke afọ a ga-ẹkenịmde ke Istanbul, ọhụrụ home Sile WOODYVILLE Treehouses 'iri [More ...]
Nkwado maka ndị chọrọ ịzụta igwe
Machine na ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịzụta Emektar Makina 'enweghị mmasị na 18 ọnwa ohere. Emektar Makina, nke na-enye mgbasa ozi na ọrụ maka ndị nwe ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịzụta ngwá ọrụ, na-enye ọnụahịa efu nke ịzụta ụlọ ọrụ ndị ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ kwesịrị ekwesị. [More ...]
Ike CW na-emepụta taya nke Century
CW Energy emepụtala sızdır n'elu ụlọ na-eguzogide, nke na-akpọ leri na tiles nke narị afọ. Ugwu ụlọ dị iche iche mepụtara dị ka uggun nke narị afọ uygun kwesịrị ekwesị maka ìhè anyanwụ kpọmkwem. Ulo onu ogugu ndi nwere akwa ocha, nke kwesiri maka ulo, mmiri-ikuku-mmiri-mmiri impermeable, ihu igwe nile [More ...]
3. A ga-enwe 2-4 International City, Environment and Congress Health na April 2020 na Izmir
Anyị bi n'ógbè, distrikti, ógbè, mpaghara, mpaghara, agwaetiti na ịma mma pụrụ iche niile; Na April 2020 ikwu ọnụ maka ụwa anyị izute ke Turkey. 3-2 maka International International, Environment na Health Congress ga-enwe na İzmir na April 4 [More ...]
RAYEN Ụlọ Ọrụ Mmalite
RAYEN Project and Consultancy Inc. Ọ bụ ụlọ ọrụ injinịa nke na-enye ọrụ dịgasị iche iche na mpaghara nke usoro ntinye ụgbọ okporo ígwè ma gbalịa ịnye ngwọta kasị mma maka ikesa ọkụ eletriki site na usoro nke catenary n'elu ụgbọ okporo ígwè. Ntọala Lines Ọdụ Ụgbọ Mmiri [More ...]
• ANYỊ ANYỊ NWA 2014 SITE ITALY AG AG. • Oge 6750 ECHICHE • 12 TONE CRENE OTO • 1 PCS 2 DIRECTION PLATFORM • 2 PCS SAG NA LEFT WIRE DRAWING CRANE • [More ...]
Ụzọ ụzọ mbụ nke ụzọ ndị njem na-esi agafe n'aka Erzurum Metropolitan
Obodo Munzurum Metropolitan kpochapuru alaka ya n'ime uzo nke "ihe ndi ozo bu ndi ozo". Iji mara ihe gbasara ngwa ahụ, ìgwè ndị mepere emepe na-eji ụkwụ na-acha uhie uhie na nke na-acha ọcha na nke dị ọcha n'akụkụ dị iche iche nke obodo ahụ. mere [More ...]
Mpaghara ndị na-enwu ọkụ na Turkey na-ezukọ na ndị na-egwu egwuregwu ụwa na Istanbul
IstanbulLight, 12. Egwuregwu International & Light Equipment Fair na Congress, 18-21 ga-enwe na September 2019 na Istanbul Expo Center. N'ebe a na-ahazi nke Ụlọ Ọrụ Ndị Na-ahụ Maka Ịkụ ọkụ Na-emepụta (AGQD) na Kọmitii Na-ahụ Maka Ahịa (ATMK), Turkish Lighting [More ...]
Onye 3 nwuru mgbe ọ na-egwu ndị Njikọ Ụgbọ okporo ígwè na Kırıkkale
Kırıkkale Republic of Turkey State Railways (TCDD), ebre nke okporo ígwè oyiyi akwa 3 enyo enyo e jidere na mkpọrọ. Ihe omume, Kırıkkale Factories Quarter Cemal Gürses Street mere. Dị ka ozi natara, Turkish State Railways (TCDD) [More ...]
Nyochaa Nlereanya: Nchịkọta Nyocha CCNP R & S
Ntụle CCNP na-agagharị na Switching na-eji ya kpọrọ ihe nke ukwuu n'ụwa nile. Ọ bụ ọkwa nchịkwa ọkachamara maka ndị ọkachamara bụ ndị nataralarị CCNA Routing na Switching. A na-eji ya na usoro na netwọk ahụ [More ...]
Nyochaa na-agbalị igosi Ihe mere Cisco Asambodo ji dị mma
N'ihe gbasara uru, uru na ogo nke usoro ihe omume nile, Cisco bụ otu n'ime ndị na-ere ahịa na mbu mgbe ọ na-abịara akwụkwọ ikikere IT. Ị nụrịrịrị na ị ga-edebanye aha maka usoro ntinye akwụkwọ Cisco nke kwekọrọ na ọrụ gị. Ị ga-anụ ya ọzọ, n'ihi na ọ dị ezigbo nkwanye ùgwù, karịsịa dịka Cisco. [More ...]